Maxaa ka jira wararka sheegaya in Axmed ismail Samater uu ku biiraayo Guddiga mucaaradka ee Nairobi looga dhawaaqay – idalenews.com
Maxaa ka jira wararka sheegaya in Axmed ismail Samater uu ku biiraayo Guddiga mucaaradka ee Nairobi looga dhawaaqay
Illo Xog ogaal oo ka ag dhow Guddiga Mucaaradka Badbaadinta Qaranka Somalia ee lagu dhisay Magaalladda Nairobi ee Xarunta Dalka Kenya, ayaa sheegaya in Prof Axmed Ismail Samater ku biiray Guddigaasi.
Axmed Ismail Samater, ayaa waxa uu Caro awgeed dhawaan isaga casilay xilka Baarlamaanka Somalia, isagoona Xilligaasi gaashaanka u daruuray inuu isu dhiibo Maamulka Somaliland si uu u nusqaamiyo tirade uu kaga jiray Baarlamaanka Somalia.
Mr. Samater, ayaa waxaa lagu soo waramayaa in maalmo ka hor ay is afgarteen Mas’uuliyiin kamid ah Guddiga Badbaadinta Qaranka Somalia, iyadoona dhawaan la filaayo inuu shaacin doono inuu ku biiray Guddigaasi, sida ay Xogta inuu sheegeyso.
Guddiga Mucaaradka Badbaadinta Qaranka Somalia ee lagu dhisay Magaalladda Nairobi, ayaa waxaa kamid ah Mas’uuliyiin caan ka ah gayiga Somalia kuwaasoo dhaliilsan qaabka ay Xukuumadda Somalia wax u wado.
Ugu dambeyntii, Prof Samater, ayaa waxa uu kamid yahay mucaaradiinta ugu weyn ee kasoo horjeeda Xukuumadda Xassan Sheikh, wallow uu muujiyo inuu yahay Shaqsi aan ka soo horjeedin arrinta Xassan Sheikh.
Wadaad Soomaaliyeed oo muteystay Abaal Marinta Quraanka Ee Caalamiga ah
Dowladda oo duulan ku ah Kismaayo iyo Ciiddamadda Kenya oo dhufeysyo hor leh sameystay
War Deg Deg ah: Duqeymo Xoogan oo xaley ka dhacey deegaano katirsan maamulka Jubaland